Ikhabhinethi encinci kwiCreek
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMyra
Ikhabhathi yethu encinci ibekwe kwindawo enoxolo ekwiikhilomitha nje ezi-2 ukusuka eHelen, GA entle. Relax kwindawo yomlilo ngelixa upheka kwi-grill yethu yamalahle okanye upholile ngaphakathi phambi kwendawo yomlilo. Yonwabela indawo enomthunzi kunye nepholileyo kunye nomfula obaleka ngasemva kweyadi. Uya kukuthanda ukufikelela ngokulula ngaphandle kobuqhophololo bomzila weentaba. Iimayile ezimbalwa kuphela ukusuka kwiingxangxasi, iindlela zokuhamba, iimbono zeentaba, iityhubhu zomlambo, ukuloba nokunye okuninzi! UXOLO AKUKHO IZILWANYANA ZESIFUYO kwaye AKUTSHAYA.
Uya kuba nayo yonke ikhabhinethi kuwe. Sisondele kakhulu kuHelen, uGa kodwa sisekude ngokwaneleyo ukuba sibe kude nezihlwele. Kwaye isekwindlela enkulu ukuze kunganyanzelekanga ukuba uqhube iindlela ezirhabaxa ezintabeni.
60" HDTV ene-I-Netflix, I-Roku
Ikhabhinethi ikwindawo yasemaphandleni enenye kuphela indlu kuyo yonke le ndawo kwaye leyo ayihlali ixesha elizeleyo. Ke ngokusisiseko uya kuba nayo yonke ipropathi kuwe. Sime nje kufutshane ne-Hwy 384 yasekhaya kangangokuba sifikeleleka ngokulula. Nangona kunjalo, kusekho imfihlo epheleleyo kwindlela esemva kweyadi.
Asizukunikhathaza xa nihleli kude nekhaya. Nangona kunjalo, sitsalela umnxeba kuphela ukuba ufuna uncedo. Imiba yogcino iya kusingathwa ngokukhawuleza njengoko sinokufumana umboneleli-nkonzo ukuba aphendule.